अर्का अध्यक्षले नेकपा एमाले दर्ता गराउनु भयो', पार्टी विभाजन उन्मुख : प्रचण्ड | Nepal Ghatana
अर्का अध्यक्षले नेकपा एमाले दर्ता गराउनु भयो’, पार्टी विभाजन उन्मुख : प्रचण्ड
प्रकाशित : १० श्रावण २०७७, शनिबार १२:२३
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको विवादले गम्भीर संकट ल्याउन सक्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
कम्युनिष्ट नेताहरु पुष्पलाल र नरबहादुर कर्मचार्यलाई स्मरण गर्दै उनले अर्काको रगत चुसेर बसेका शासकहरूलाई फ्याँकेर ल्याइएको अहिलेको शासन व्यवस्थामा जनता निराश हुँदै गएको बताए।
दाहालले अहिले पार्टीमा चलेको संघर्ष कम्युनिष्टहरुको नियमित अभ्यास भएको बताए। वर्ष संघर्ष र वैचारिक विवादमा आइरहन्छ कम्युनिष्ट पार्टीमा। कम्युनिष्ट पार्टीको संघर्ष समाजमा चलेको संघर्षको प्रतिरूप होु, उनले भने, एकता, संघर्ष, रुपान्तरण र फुटसम्म पनि पुगेका छन् कम्युनिष्ट पार्टीहरू। एकता निश्‍चित मूल्य मान्यता र विधि पद्धतिका आधारमा हुन्छ। एकता चोचोमोचो मिलाएर हुँदैन। संघर्षको जगभन्दा बाहिर एकताको माला जपेर पार्टी बलियो हुँदैन।
अध्यक्ष दाहालले एकता, संघर्ष, रुपान्तरणबाट फुटसम्म पुगेमा पनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता आवश्यक हुने पनि बताए। एंगेल्सले भनेको संघर्ष गर्दै जाँदा हरेक प्रवृत्तिले पार्टी एकता हुन्छ नै भन्‍ने छैन, फुटमा पनि जान कस्छ। हामी अहिलेका कम्युनिष्टहरुले संसारभरिको इतिहास हेर्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा विभाजनको अवस्था पनि आउन सक्छ, यो कम्युनिष्ट पार्टीको अभ्यास नै हो।
पार्टी फुट्न पनि सक्छ !
प्रचण्डले पार्टीभित्र चलेको संघर्ष समाजमा चल्ने संघर्षको प्रतिविम्ब रहेको बताएका छन्।
पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसका सन्दर्भमा शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ तबसम्म पार्टीभित्र संघर्ष चलिरहन्छ। समाजमा चलेको संघर्षकै रिफ्लेक्सन पार्टीभित्र चल्ने हो,’ उनले भने, ‘एकता, संघर्ष र रूपान्तरणपछि नयाँ आधारमा एकता हुन पनि सक्छ र फूट पनि हुन सक्छ ।’
प्रचण्डले एकता विधि र पद्धतिका आधारमा हुने कुरामा जोड दिँदै भने, ‘एकता चोचोमोचो मिलाएर हुने कुरा होइन । विचार संघर्षको बलमा नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकता हुने हो। एकता संघर्षद्वारा हासिल गरिने कुरा हो । संघर्षबाट एकतै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। एकता संघर्ष रुपान्तरण पछि नयाँ आधारमा एकता भएन भने पार्टी फुट्न सक्छ ।
‘उनले पार्टीभित्र भएको संघर्षलाई संकेत गर्दै एकतै हुनुपर्छ भन्ने आदर्शवादी भ्रममा नरहन सबैलाई आग्रह गरे ।
नेकपा संकटमा छ, तर विभाजन रोक्न अन्तिम प्रयास जारी छ
प्रचण्डले पार्टी संकटमा परेपनि विभाजन हुनबाट रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहने बताएका छन् ।
‘पार्टी विभाजन हुन दिइने छैन र एकताबद्ध राखिनेछ’ प्रचण्डको भनाई छ । उनले नेकपालाई व्यक्ति केन्द्रीत नभई विचार केन्द्रीत पार्टी बनाउने दावी पनि गरे । ‘पार्टीलाई विचार केन्द्रीत बनाइनेछ र विधि र पद्धतिमा चलाइने पार्टी बनाइनेछ । यो बहसको यो अन्तिम निश्कर्ष पार्टीमा विचार पनि स्पस्ट भएर आउने छ र विधिलाई पालना गर्ने कुरालाई जन्म दिने छ’ प्रचण्डको भनाई छ ।
उनले विचारको बहस गर्ने क्रममा कसैले पनि अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद नै पार्टीको कार्यदिशा बनिनसकेको भन्दै नयाँ विचारको खोजी भइरहेको र त्यसक्रममा पार्टीमा केही विवादहरु देखिएको बताए । उनले पार्टीको विचार नै सर्वैसर्वा हुने भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यही विचारका आधारमा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गरिने बताए । ‘पार्टी भनेको विचार विधि हो । विचार र विधि पद्धति नै पार्टी हो । यसमा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ । यहि प्रयास हामीले गर्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाई छ ।
उनले सामूहिक निर्णयलाई नमाने एकता निश्कर्षमा नपुग्ने पनि बताए । पार्टी एकतापछि पार्टीमा समाजवादी राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिको बहस चलिरहेपनि त्यो बहस जनतामा लैजान नसकिएको स्वीकार गरे । प्रचण्डले पार्टीको जारी बैठककै बेला नेकपा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको र देशभरी नाराजुलुस भएकाले धेरै नेता कार्यकर्तामा पार्टी एकता नसकिँदै फुट्न लागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जनुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
प्रचण्डले एकताको २ वर्षसम्म केन्द्रीय समिति बैठक गर्न नसक्नुमा नेतृत्व चुकेको भन्दै यो बीचमा सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको बताए । उनले अहिले सरकारले पार्टीमाथि हैकम चलाएको जस्तो देखिएको पनि बताए । ‘पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । सरकारले पार्टीमाथि हैकम चलाउने होइन’, प्रचण्डको भनाई छ ।
प्रचण्डले एकता र संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टीमा सामान्य भन्दै तर चोचोमोचो मिलाएर एकता सम्भव नहुने बताए । ‘चोचोमोचो मिलाएर हुँदैन । त्यसबाट मात्रै एकता हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । एकता, संघर्ष र रुपान्तरण । नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुने हो’ प्रचण्डको दावी छ । कार्यक्रममा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा विधि पद्दति र सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्न जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए
नेता एउटाको नेतृत्व अर्कै
अध्यक्ष दाहालले अहिले नेकपामा नीति एउटाको तर नेतृत्वमा अर्कै रहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कटाक्ष गरे। पुष्पलालले अनेक दु:ख र हन्डर खाएर पार्टी बनाउनु भएको थियो। २०१४ सालमा विचार, सिद्धान्त र नीतिसमेत उहाँकै पारित भएको थियो। नीति एउटाको पारित हुने तर नेतृत्वमा अर्को हुने समस्या उतिबेलै थियो। आजको समस्या पनि त्यहीँ पो हो कि !
अध्यक्ष दाहालले पुष्पलालको जनवादी क्रान्तिको नीति पारित हुँदा पनि राजा परस्त केशरजंग रायमाझी नेतृत्वमा जाने कुराले कम्युनिष्टमा गम्भीर समस्या ल्याएको बताए। २०१४ सालपछि जस्तो भयो अहिले त्यस्तै हुँदैछ, नीति एउटाको छ तर नेतृत्वमा अर्कै छ। अहिले पनि त्यस्तै हुँदैछ, यसरी त पार्टी दुर्घटनामा जान्छ, जान्छ। कसैले पवित्र इच्छा राख्दैमा पार्टी एक भइरहँदैन।
अध्यक्ष दाहालले पार्टी गम्भीर संकटमा परेको बताए। ‘मैले पहिले पनि भनेको छु। पार्टी संकटमा छ। पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा अर्का अध्यक्षको सक्रियतामा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ता अघि बढाइयो’, उनले भने, ‘यसले संकटलाई व्यक्त गरेकै छ। देशभरी केही कार्यकर्तालाई नारा जुलुसमा लगाउने कोसिस भइरहेको छ। मुर्दावाद र जिन्दावादका नारा लागिरहेका छन्।
हामीले साथीहरुलाई धैर्य गर्नुस् भनेका छौं। तर त्यस खालका प्रचारवाजी पनि भइरहेका छन्। पार्टी संकटमा छ, सामान्य अवस्थामा छैन। उनले अहिलेका गतिविधिले पार्टी पछाडी फर्किन खोजेको देखिएको बताए। ‘हामी कता कता पछि फर्किन खोजेको देखिँदैछ। कसैले जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद, कसैले माओवाद त कसैले २१ औँ शताब्दीको जनवाद जिन्दाबाद भन्यो भने त्यो एकतातिर गएको हुँदैन’, उनले थपे, ‘अब पार्टीको भविष्य के हुन्छ? महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन? महाधिवेशन नहुँदै पार्टी फुट्ने त होइन भन्‍ने चिन्ता कार्यकर्तामा छ। देशभरीका जनताको मनको कुरा हामीले बुझेका छौं। त्यसैले सच्चिएर अघि बढ्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन।
‘ दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै किन यस्तो संकट पैदा भयो?’ आजको प्रश्‍न यही नै रहेको उनले बताए। ‘हामीले एकताको दुई वर्षयता सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकास गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ। दुई वर्षसम्म त बैठक नै बस्‍न सकिएन नि। ६ महिनामा बस्‍ने केन्द्रीय कमिटी बैठक दुई वर्षमा बस्यो। हामी त्यहीँ चुक्यौँ। समस्या आउँदा खुला छलफल गर्ने निचोड निकाल्ने विधि अपनायौँ कि अपनाएनौँ, गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ’|
उनले थपे, ‘बैठक नै नबसेपछि सामूहिक छलफल र निष्कर्ष भएन। विवेक र सत्तामध्ये कुन प्रधान हो ? विवेकले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने स्थिति भयो भने त्यो वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिर हुन्छ। सत्ता विवेकमाथि हाबी हुने हो कि भन्‍ने चिन्ता छ। समूह अधिनस्थ व्यक्ति हुनुपर्नेमा व्यक्ति अधिनस्थ पो समूह पो भयो कि!’
चुनावमा दुई पार्टीले साझा घोषणापत्र लिएर जाँदा सुशासनलाई जोड दिइएको उनले बताए। ‘हामीले जनतालाई सुशासन दिन्छौं भन्यौँ तर भ्रष्टाचारका प्रश्‍नको निराकरणमा हामी कति सफल भयौं? भन्‍ने कुरा हो। हामीले विचारलाई कि पावरलाई प्राथमिकता दिने हो? हाम्रो पार्टीमा बैठक नै बस्‍न पनि कसरत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बैठकको गरिमालाई कायम राख्‍न सकिएन’, उनले भने।